ဆာအဲလကျဈ မရှိတော့တဲ့ နောကျ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ကို ငွငျးဆနျခဲ့ကွသူမြား - SPORTS MYANMAR
ဆာအဲလကျဈ မရှိတော့တဲ့ နောကျ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ကို ငွငျးဆနျခဲ့ကွသူမြား
ဘောလုံး သမား တဈယောကျ အသငျး ပွောငျးရှမှေု့ မှာ ဘယျ အရာတှေ က အရေးပါ နသေလဲ . . . ကလပျ အသငျး ရဲ့ အနေ အထား ၊ ရရှိမယျ့ လစာ ၊ ပတျဝနျးကငျြ ၊ အနာဂါတျ အလား အလာ စတဲ့ အခကျြတှေ လိုပဲ ဘယျသူ က နညျးပွ နတေယျ ဆိုတာ ကိုလညျး ထညျ့သှငျး စဉျးစား လေ့ ရှိကွပါတယျ ။ နညျးပွ ကောငျးတှေ ရှိတဲ့ အသငျး ကို ကစား သမား ကောငျးတှေ လာခငျြ ကွသလို အပွနျ အလှနျ အားဖွငျ့ အရှိနျ အဝါ နဲ့ အောငျမွငျမှု မရှိတဲ့ နညျးပွ ဆီ ကို ကစား သမားကောငျးတှေ လာရောကျဖို့ တှနျ့ဆုတျ တတျကွ တာ သဘာဝ ပါပဲ ။
မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ ဟာ ဆာအဲလကျဈ ဖာဂူဆနျ လကျထကျ မှာ အင်ျဂလနျ ရဲ့ အအောငျမွငျ ဆုံး အသငျး ဖွဈခဲ့ ပါတယျ ။ အမှတျပေး ဖလား တှကေို နှဈတိုငျး လိုလို ရယူ နိုငျခဲ့ တဲ့ အပွငျ ဥရောပ ပွိုငျပှဲ တှေ မှာ လညျး ဗိုလျစှဲ ခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ ကစား သမား ကောငျးတှေ ဟာ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ မှာ ကစား ဖို့ အိပျမကျ မကျခဲ့ ကွပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ ဖာဂူဆနျ အနားယူ သှားတဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှဈ နှရောသီ က စလို့ ဒါတှေ ဟာ ပွောငျးလဲ သှားခဲ့ ပါတယျ ။ ဒေးဗဈ မိုရကျဈ ၊ လူးဝဈ ဗနျဟား ၊ ဟိုဆေး မျောရငျဟို နဲ့ ဆိုးရှား တို့ အထိ နညျးပွ ၄ ဦး ပွောငျးလဲ လာခဲ့ ခြိနျ မှာ ယူနိုကျတကျ ရဲ့ အရှိနျ အဝါ ဟာ ကဆြငျး လာခဲ့ပွီး ကစား သမား တှေ ကလညျး အိုးထရကျဖိုဒျ့ မှာ လာရောကျ စှနျ့စားဖို့ တှနျ့ဆုတျ လာခဲ့ ကွပါတယျ ။
ဒီ အထဲ မှာ ဗနျဟား ၊ မျောရငျဟို လို ထိပျတနျး နညျးပွတှေ တောငျ ပါဝငျခဲ့ ပါတယျ ။ သူတို့ ဟာ နညျးပွ ဘဝ မှာ အောငျမွငျမှု တှေ ရရှိ ထားခဲ့ ပမေယျ့ နာမညျကြျော တိုကျစဈ သမားတှေ နဲ့ မကိုကျညီတဲ့ ကစားပုံတှေ ကွောငျ့ အိုးထရကျဖိုဒျ့ ကို လူကောငျးတှေ ရောကျမလာ နိုငျခဲ့ ကွပါဘူး ။ မိုရကျဈ နဲ့ ဆိုးရှား တို့ ကတော့ အရှိနျ အဝါ ကငျးမဲ့ သူတှဖွေဈလို့ ထိပျတနျး ကစား သမားတှေ ကို မဆှဲဆောငျ နိုငျခဲ့ ကွပါဘူး ။
အခု ဖျောပွမယျ့ စာရငျး ကတော့ ဆာအဲလကျဈ ဖာဂူဆနျ အနားယူပွီး နောကျပိုငျး မှာ ယူနိုကျတကျ ရဲ့ ကမျးလှမျးမှု ကို ရရှိပွီး ငွငျးပယျ ခဲ့တယျလို့ ထုတျဖျော ပွောဆို ခဲ့တဲ့ လူစာရငျးပဲ ဖွဈ ပါတယျ –
၁ ။ ဖာဘရီဂတျ
ဒေးဗဈ မိုရကျဈ ဟာ ဘာစီလိုနာ မှာ ကစားနတေဲ့ စပိနျသား ကို ကွိုးစားခဲ့ ဖူးပမေယျ့ ဖာဘရီဂတျ က ငွငျးပယျ ခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ နောကျ ၁ နှဈ အကွာ မှာ အသငျးဟောငျး အာဆငျနယျ ရဲ့ ခါးသီးလှတဲ့ မွို့ခံပွိုငျဘကျ ခြဲလျဆီး ကို ဖာဘရီဂတျ ပွောငျးရှေ့ လာခဲ့ တာကတော့ ယူနိုကျတကျ ပရိသတျတှေ မခငျြ့မရဲ ဖွဈစရာ ပါပဲ ။
၂ ။ တိုနီ ကရူးဈ
ဘိုငျယနျ မှာ ရှိနစေဉျ က ယူနိုကျတကျ ရဲ့ ကမျးလှမျးမှု ကို ငွငျးပယျ ခဲ့တဲ့ အတှကျ တိုနီ ကရူးဈ တဈယောကျ နောငျတရ မိမှာ မဟုတျတာ အသအေခြာ ပါပဲ ။ ယူနိုကျတကျ ကို သာ ပွောငျးခဲ့ရငျ ခနျြပီယံ လိဂျ ၀ငျခှငျ့ အတှကျ တိုကျပှဲ ၀ငျကောငျး ၀ငျနေ ရမှာ ဖွဈပွီး ရီးရဲ ကို ပွောငျးခဲ့တဲ့ အတှကျ ခနျြပီယံ လိဂျ ဖလား ၄ လုံးရှငျ ဖွဈလာခဲ့ ရ ပါတယျ ။
၃ ။ သီယာဂို အယျကနျထရာ
ဘာကာ လူငယျ လေး အယျကနျထရာ ကို ဒေးဗဈ မိုရကျဈ စိတျဝငျစား ခဲ့ ပါတယျ ။ လူငယျ တဈယောကျ အတှကျ တော့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ က ကမျးလှမျးတယျ ဆိုတဲ့ အသိဟာ ရငျခုနျ စိတျလှုပျရှားစေ မှာ အမှနျ ပါပဲ ။ ဒါပမေယျ့ ဒီဂီယာ နဲ့ အတူ စပိနျ လူငယျ အသငျးမှာ ကစားခဲ့တဲ့ အယျကနျထရာ ဟာ ဘိုငျယနျမွုးနဈ ကို ရှေးခယျြ သှားခဲ့ ပါတယျ ။ ဖာဂူဆနျ သာ ဆိုရငျ ကြိနျးသေ ပေါကျ ရောကျလာနိုငျတဲ့ ကစား သမားမြိုး ကို ယူနိုကျတကျ တို့ လကျလှတျ ခဲ့ရ တာပါပဲ ။
၄ ။ ဂါရတျဘေးလျ
ရီးရဲ မကျဒရဈ ထကျ ပိုပွီး စြေးပေးခဲ့ ပမေယျ့ ဝေးလျ တောငျပံ ကစား သမား ကတော့ သူ့ရဲ့ အိပျမကျ ကို မစှနျ့ လှတျ ခဲ့ ပါဘူး ။ အခု အခြိနျ မှာ ဘေးလျ အနနေဲ့ ဒီဆုံးဖွတျခကျြ ကို ပွနျတှေးပွီး ကနြေပျနမှောပါ ။ ၂၀၁၃ ကနေ ၂၀၁၉ အထိ ၆ နှဈ ကွာသှားခဲ့ ပမေယျ့ ဘေးလျ နဲ့ ယူနိုကျတကျ တို့ရဲ့ သတငျးတှကေတော့ ထှကျဆဲ ထှကျမွဲ ပါပဲ ။
၅ ။ သောမတျဈမူလာ
ယူနိုကျတကျ ကို ဗနျဟား ရောကျလာခြိနျ မှာ တပညျ့ဟောငျး မူလာ ကို ဘိုငျယနျ ကနေ ချေါဖို့ ကွိုးစားခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ မူလာ ရဲ့ စိတျထဲမှာ ဘိုငျယနျမွုးနဈ ဟာ သူ ခေါငျးခမြယျ့ အသငျးလို့ ခံယူထားတာ ကွောငျ့ အင်ျဂလနျ ကို လာဖို့ ငွငျးပယျ ခဲ့ ပါတယျ ။ မျောရငျဟို ယူနိုကျတကျ ကို စတငျ ကိုငျတှယျ ခြိနျ မှာလညျး မူလာ ကို သနျး ၈၀ ကြျော အထိ ပေးပွီး ချေါဖို့ ဘုတျအဖှဲ့ ရဲ့ ထောကျခံမှု ကို ရရှိ ခဲ့ ပမေယျ့ မူလာ က ထပျမံ ငွငျးဆနျ ခဲ့ပွနျ ပါတယျ ။
၆ ။ ဆာဂြီယို ရာမိုဈ့
၂၀၁၅ နှရောသီ တုနျးက ရီးရဲ ဥက်ကဌ ပီရကျဈ နဲ့ အဆငျမပွေ မှုတှေ ရှိနတေယျ လို့ သတငျး ထှကျပျေါ အပွီး မှာ ရာမိုဈ့ ကို မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ က စိတျဝငျ စားလာခဲ့ ပါတယျ ။ မကျဒရဈ ရဲ့ သံမဏိ အသငျး ခေါငျးဆောငျ ကို အိုးထရကျဖိုဒျ့ မှာ မွငျတှေ့ လိုသူ တှေ ရှိခဲ့ ပမေယျ့ နောကျဆုံး မှာတော့ ရာမိုဈ့ ဟာ ရီးရဲ နဲ့ ကာလရှညျ စာခြုပျ ကို ခြုပျဆို သှားခဲ့ ပါတယျ ။
၇ ။ ပကျဒရို
လူးဝဈ အငျးနရဈ ရဲ့ အသငျး မှာ နရော ပြောကျခဲ့တာ ကွောငျ့ ၂၀၁၅ နှရောသီ မှာ ပကျဒရို ဟာ ဘာစီလိုနာ ကို စှနျ့ခှာဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ ပါတယျ ။ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ နဲ့ ခြဲလျဆီးတို့ က အပွိုငျ ခဉျြးကပျ ခဲ့ကွပွီး ပကျဒရို က ခြဲလျဆီး ကို ရှေးခယျြ ကာ ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလား ၊ FA Cup နဲ့ ယူရိုပါလိဂျ တို့ကို ရယူ ကိုငျမွှောကျ နိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။
၈ ။ ရာဖေး ဗာရိနျး
ဗာရိနျး ဟာ ဖာဂူဆနျ လကျထကျ ကတညျးက ယူနိုကျတကျ ရဲ့ ကမျးလှမျးမှု ကို ငွငျးပယျ ခဲ့ဖူး ပါတယျ ။ မျောရငျဟို ရောကျလာတဲ့ ၂၀၁၆ မှာ လညျး ယူနိုကျတကျ ဟာ ဗာရိနျး ကိုနောကျတဈကွိမျ ကမျးလှမျးခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဗာရိနျး ကတော့ ယူနိုကျတကျ ဟာ ထိပျတနျး ကလပျ ဖွဈကွောငျး ပွောဆို ခဲ့ ပွီး လကျရှိ မှာတော့ ရီးရဲ မှာသာ ဆကျလကျ ကစားဖို့ ဆုံးဖွတျ ထားပါတယျ လို့ ပွောဆိုကာ သတငျးတှကေို အဆုံးသတျ ပေးခဲ့ ပါတယျ ။
၉ ။ ဆာဒီယို မာနေး
ဆောကျသမျတနျ မှာ ခွစှေမျးပွ နတေဲ့ မာနေး ကို လူးဝဈ ဗနျဟား က စိတျဝငျစား ခဲ့ ပါတယျ ။ မာနေး ကိုယျတိုငျ က လူးဝဈ ဗနျဟား နဲ့ ဆုံတှေ့ ခဲ့ပွီး ယူနိုကျတကျ က ကမျးလှမျးခဲ့ ကွောငျး ကို ထုတျဖျော ပွောပွ ခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဆီနီဂေါ တိုကျစဈမှုး ဟာ ဗနျဟား ရဲ့ ကစားပုံ ကွောငျ့ ယူနိုကျတကျ ကို ငွငျးပယျ ခဲ့ပွီး နောကျ တဈနှဈ မှာတော့ လီဗာပူး ကို ပွောငျးရှေ့ သှားခဲ့ ပါတယျ ။ မာနေး ရဲ့ အစှမျးအစ ကတော့ အားလုံး သိကွပွီး ဖွဈ မှာပါ ။
၁၀ ။ ၀ီလျယံ
ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈ နှရောသီ မှာ ခြဲလျဆီး က တပညျ့ဟောငျး ကို မျောရငျဟို ကွိုးစား ကွညျ့ခဲ့ ဖူး ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ၀ီလျယံ ကတော့ အပွာရောငျ ကို စှနျ့ကာ အနီရောငျ ကို ၀တျဆငျ ဖို့ ဆန်ဒ မရှိခဲ့ ပါဘူး ။ အခု အခြိနျ မှာတော့ ၀ီလျယံ ဟာ ခြဲလျဆီး အတှကျ ပှဲပေါငျး ၃၀၀ ပွညျ့မွောကျ သှားခဲ့ပွီး အသံတိတျ ဂန်ထဝငျ တဈယောကျ ဖွဈလာ ခဲ့ ပါတယျ ။
၁၁ ။ အနျဂိုလို ကနျတီ
လကျစတာ ရဲ့ ကှငျးလယျ မှာ မမောတမျး မပနျးတမျး ပွေးလှား ဖကျြထုတျ ပွီး ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလားကွီးကို ရယူပေးခဲ့တဲ့ ကနျတီ ကို မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ နညျးပွ ဖွဈလာခြိနျ မှာ မျောရငျဟို က ချေါယူ ဖို့ ကွိုးစား ခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ မအောငျမွငျ ခဲ့ ပါဘူး ။ ကနျတီ ဆီ ကိုယျတိုငျ ဆကျသှယျ ခဲ့ ပမေယျ့ ကစား သမား က ခြဲလျဆီး ကို ရှေးခယျြ သှားခဲ့ ပါတယျ ။ ကနျတီ လညျး ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလား ကို ၂ နှဈဆကျ တိုကျ ရခဲ့ပါတယျ ။
၁၂ ။ အယျဗာရို မိုရာတာ
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ကို ငွငျးပယျပွီး ခြဲလျဆီး ကို ပွောငျးရှေ့ တဲ့ ကစား သမားတှေ ဟာ ဖာဂူဆနျ နှောငျးပိုငျး ခတျေတှေ မှာ ပိုမို မြားပွား လာခဲ့ ပါတယျ ။ ကနျတီ ၊ ပကျဒရို တို့ ကိစ်စ တှေ မှာ ယူနိုကျတကျ ပရိသတျတှေ နှမွော တသ ဖွဈခဲ့ ပမေယျ့ မိုရာတာ အပျေါ မှာ တော့ ၀မျးမွောကျ ၀မျးသာ ဖွဈခဲ့ကွ မှာ သခြော ပါတယျ ။ ယူနိုကျတကျ ကို ရှေးခယျြ ဖို့ ငွငျးဆနျ ခဲ့တဲ့ စပိနျတိုကျစဈမှုး ဟာ ခြဲလျဆီး မှာ ပုံစံ ကောငျးမပွသ နိုငျ ခဲ့ဘဲ မကျဒရဈ ကို ပွနျပွေး ခဲ့ရ ပါတယျ ။ ယူနိုကျတကျ ကတော့ အဆိုပါ နှဈ မှာ မိုရာတာ ကို မရလို့ ချေါယူခဲ့တဲ့ လူကာကူ ရဲ့ သှငျးဂိုးတှေ ကွောငျ့ တဈရာသီစာ ပြျောရှငျမှု ကို ရရှိ ခဲ့ ပါတယျ ။
ဒီ ကစား သမားတှေ ဟာ ဆာအဲလကျဈ ဖာဂူဆနျ အနားယူ သှားပွီး နောကျပိုငျး မှာ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ရဲ့ ကမျးလှမျးမှု ကို ငွငျးပယျ ခဲ့ပါတယျ လို့ ထုတျဖျော ပွောဆို ခဲ့ကွသူတှေ ဖွဈ ပါတယျ ။ ဒီလို ထုတျဖျော မပွောပွ တဲ့ သူတှေ ရှိကွဦးမှာပါ ။ တကယျလို့ သာ ဖာဂူဆနျ ဆကျပွီး ရှိနခေဲ့ဦးမယျ ဆိုရငျ ဒီစာရငျး ထဲက တဈဝကျ လောကျဟာ ယူနိုကျတကျ ကစား သမားတှေ ဖွဈလာ နိုငျ ပါတယျ ။
ဒါကွောငျ့ ကလပျ အသငျး တဈသငျး ဆီကို ကစား သမား ကောငျးတှေ ရောကျလာဖို့ အတှကျ နညျးပွ ကောငျး တဈယောကျ ရှိနဖေို့ ကလညျး လိုအပျ တယျဆိုတာ ကို သိသာ မွငျသာ စခေဲ့ ပါတယျ ။ အခု အခြိနျ မှာ ဆိုရငျ ကစား သမား ကောငျးတှေ ဟာ ဆိုးရှား ထကျ ဂှာဒီယိုလာ နဲ့ ယာဂငျ ကလော့ တို့ ကို ရှေးခယျြ ခငျြကွမှာ အသအေခြာ ပါပဲ . . .
ဆာအဲလက်စ် မရှိတော့တဲ့ နောက် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို ငြင်းဆန်ခဲ့ကြသူများ
ဘောလုံး သမား တစ်ယောက် အသင်း ပြောင်းရွှေ့မှု မှာ ဘယ် အရာတွေ က အရေးပါ နေသလဲ . . . ကလပ် အသင်း ရဲ့ အနေ အထား ၊ ရရှိမယ့် လစာ ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ၊ အနာဂါတ် အလား အလာ စတဲ့ အချက်တွေ လိုပဲ ဘယ်သူ က နည်းပြ နေတယ် ဆိုတာ ကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစား လေ့ ရှိကြပါတယ် ။ နည်းပြ ကောင်းတွေ ရှိတဲ့ အသင်း ကို ကစား သမား ကောင်းတွေ လာချင် ကြသလို အပြန် အလှန် အားဖြင့် အရှိန် အ၀ါ နဲ့ အောင်မြင်မှု မရှိတဲ့ နည်းပြ ဆီ ကို ကစား သမားကောင်းတွေ လာရောက်ဖို့ တွန့်ဆုတ် တတ်ကြ တာ သဘာဝ ပါပဲ ။
မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန် လက်ထက် မှာ အင်္ဂလန် ရဲ့ အအောင်မြင် ဆုံး အသင်း ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ အမှတ်ပေး ဖလား တွေကို နှစ်တိုင်း လိုလို ရယူ နိုင်ခဲ့ တဲ့ အပြင် ဥရောပ ပြိုင်ပွဲ တွေ မှာ လည်း ဗိုလ်စွဲ ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ကစား သမား ကောင်းတွေ ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် မှာ ကစား ဖို့ အိပ်မက် မက်ခဲ့ ကြပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဖာဂူဆန် အနားယူ သွားတဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် နွေရာသီ က စလို့ ဒါတွေ ဟာ ပြောင်းလဲ သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒေးဗစ် မိုရက်စ် ၊ လူးဝစ် ဗန်ဟား ၊ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို နဲ့ ဆိုးရှား တို့ အထိ နည်းပြ ၄ ဦး ပြောင်းလဲ လာခဲ့ ချိန် မှာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ အရှိန် အ၀ါ ဟာ ကျဆင်း လာခဲ့ပြီး ကစား သမား တွေ ကလည်း အိုးထရက်ဖိုဒ့် မှာ လာရောက် စွန့်စားဖို့ တွန့်ဆုတ် လာခဲ့ ကြပါတယ် ။
ဒီ အထဲ မှာ ဗန်ဟား ၊ မော်ရင်ဟို လို ထိပ်တန်း နည်းပြတွေ တောင် ပါဝင်ခဲ့ ပါတယ် ။ သူတို့ ဟာ နည်းပြ ဘ၀ မှာ အောင်မြင်မှု တွေ ရရှိ ထားခဲ့ ပေမယ့် နာမည်ကျော် တိုက်စစ် သမားတွေ နဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ ကစားပုံတွေ ကြောင့် အိုးထရက်ဖိုဒ့် ကို လူကောင်းတွေ ရောက်မလာ နိုင်ခဲ့ ကြပါဘူး ။ မိုရက်စ် နဲ့ ဆိုးရှား တို့ ကတော့ အရှိန် အ၀ါ ကင်းမဲ့ သူတွေဖြစ်လို့ ထိပ်တန်း ကစား သမားတွေ ကို မဆွဲဆောင် နိုင်ခဲ့ ကြပါဘူး ။
အခု ဖော်ပြမယ့် စာရင်း ကတော့ ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန် အနားယူပြီး နောက်ပိုင်း မှာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု ကို ရရှိပြီး ငြင်းပယ် ခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို ခဲ့တဲ့ လူစာရင်းပဲ ဖြစ် ပါတယ် –
၁ ။ ဖာဘရီဂတ်
ဒေးဗစ် မိုရက်စ် ဟာ ဘာစီလိုနာ မှာ ကစားနေတဲ့ စပိန်သား ကို ကြိုးစားခဲ့ ဖူးပေမယ့် ဖာဘရီဂတ် က ငြင်းပယ် ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် နောက် ၁ နှစ် အကြာ မှာ အသင်းဟောင်း အာဆင်နယ် ရဲ့ ခါးသီးလှတဲ့ မြို့ခံပြိုင်ဘက် ချဲလ်ဆီး ကို ဖာဘရီဂတ် ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့ တာကတော့ ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ မချင့်မရဲ ဖြစ်စရာ ပါပဲ ။
၂ ။ တိုနီ ကရူးစ်
ဘိုင်ယန် မှာ ရှိနေစဉ် က ယူနိုက်တက် ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု ကို ငြင်းပယ် ခဲ့တဲ့ အတွက် တိုနီ ကရူးစ် တစ်ယောက် နောင်တရ မိမှာ မဟုတ်တာ အသေအချာ ပါပဲ ။ ယူနိုက်တက် ကို သာ ပြောင်းခဲ့ရင် ချန်ပီယံ လိဂ် ၀င်ခွင့် အတွက် တိုက်ပွဲ ၀င်ကောင်း ၀င်နေ ရမှာ ဖြစ်ပြီး ရီးရဲ ကို ပြောင်းခဲ့တဲ့ အတွက် ချန်ပီယံ လိဂ် ဖလား ၄ လုံးရှင် ဖြစ်လာခဲ့ ရ ပါတယ် ။
၃ ။ သီယာဂို အယ်ကန်ထရာ
ဘာကာ လူငယ် လေး အယ်ကန်ထရာ ကို ဒေးဗစ် မိုရက်စ် စိတ်ဝင်စား ခဲ့ ပါတယ် ။ လူငယ် တစ်ယောက် အတွက် တော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် က ကမ်းလှမ်းတယ် ဆိုတဲ့ အသိဟာ ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားစေ မှာ အမှန် ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ဒီဂီယာ နဲ့ အတူ စပိန် လူငယ် အသင်းမှာ ကစားခဲ့တဲ့ အယ်ကန်ထရာ ဟာ ဘိုင်ယန်မြုးနစ် ကို ရွေးချယ် သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဖာဂူဆန် သာ ဆိုရင် ကျိန်းသေ ပေါက် ရောက်လာနိုင်တဲ့ ကစား သမားမျိုး ကို ယူနိုက်တက် တို့ လက်လွှတ် ခဲ့ရ တာပါပဲ ။
၄ ။ ဂါရတ်ဘေးလ်
ရီးရဲ မက်ဒရစ် ထက် ပိုပြီး ဈေးပေးခဲ့ ပေမယ့် ဝေးလ် တောင်ပံ ကစား သမား ကတော့ သူ့ရဲ့ အိပ်မက် ကို မစွန့် လွှတ် ခဲ့ ပါဘူး ။ အခု အချိန် မှာ ဘေးလ် အနေနဲ့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက် ကို ပြန်တွေးပြီး ကျေနပ်နေမှာပါ ။ ၂၀၁၃ ကနေ ၂၀၁၉ အထိ ၆ နှစ် ကြာသွားခဲ့ ပေမယ့် ဘေးလ် နဲ့ ယူနိုက်တက် တို့ရဲ့ သတင်းတွေကတော့ ထွက်ဆဲ ထွက်မြဲ ပါပဲ ။
၅ ။ သောမတ်စ်မူလာ
ယူနိုက်တက် ကို ဗန်ဟား ရောက်လာချိန် မှာ တပည့်ဟောင်း မူလာ ကို ဘိုင်ယန် ကနေ ခေါ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် မူလာ ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဘိုင်ယန်မြုးနစ် ဟာ သူ ခေါင်းချမယ့် အသင်းလို့ ခံယူထားတာ ကြောင့် အင်္ဂလန် ကို လာဖို့ ငြင်းပယ် ခဲ့ ပါတယ် ။ မော်ရင်ဟို ယူနိုက်တက် ကို စတင် ကိုင်တွယ် ချိန် မှာလည်း မူလာ ကို သန်း ၈၀ ကျော် အထိ ပေးပြီး ခေါ်ဖို့ ဘုတ်အဖွဲ့ ရဲ့ ထောက်ခံမှု ကို ရရှိ ခဲ့ ပေမယ့် မူလာ က ထပ်မံ ငြင်းဆန် ခဲ့ပြန် ပါတယ် ။
၆ ။ ဆာဂျီယို ရာမိုစ့်
၂၀၁၅ နွေရာသီ တုန်းက ရီးရဲ ဥက္ကဌ ပီရက်စ် နဲ့ အဆင်မပြေ မှုတွေ ရှိနေတယ် လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် အပြီး မှာ ရာမိုစ့် ကို မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် က စိတ်ဝင် စားလာခဲ့ ပါတယ် ။ မက်ဒရစ် ရဲ့ သံမဏိ အသင်း ခေါင်းဆောင် ကို အိုးထရက်ဖိုဒ့် မှာ မြင်တွေ့ လိုသူ တွေ ရှိခဲ့ ပေမယ့် နောက်ဆုံး မှာတော့ ရာမိုစ့် ဟာ ရီးရဲ နဲ့ ကာလရှည် စာချုပ် ကို ချုပ်ဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
၇ ။ ပက်ဒရို
လူးဝစ် အင်းနရစ် ရဲ့ အသင်း မှာ နေရာ ပျောက်ခဲ့တာ ကြောင့် ၂၀၁၅ နွေရာသီ မှာ ပက်ဒရို ဟာ ဘာစီလိုနာ ကို စွန့်ခွာဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပါတယ် ။ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ ချဲလ်ဆီးတို့ က အပြိုင် ချဉ်းကပ် ခဲ့ကြပြီး ပက်ဒရို က ချဲလ်ဆီး ကို ရွေးချယ် ကာ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား ၊ FA Cup နဲ့ ယူရိုပါလိဂ် တို့ကို ရယူ ကိုင်မြှောက် နိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
၈ ။ ရာဖေး ဗာရိန်း
ဗာရိန်း ဟာ ဖာဂူဆန် လက်ထက် ကတည်းက ယူနိုက်တက် ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု ကို ငြင်းပယ် ခဲ့ဖူး ပါတယ် ။ မော်ရင်ဟို ရောက်လာတဲ့ ၂၀၁၆ မှာ လည်း ယူနိုက်တက် ဟာ ဗာရိန်း ကိုနောက်တစ်ကြိမ် ကမ်းလှမ်းခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဗာရိန်း ကတော့ ယူနိုက်တက် ဟာ ထိပ်တန်း ကလပ် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆို ခဲ့ ပြီး လက်ရှိ မှာတော့ ရီးရဲ မှာသာ ဆက်လက် ကစားဖို့ ဆုံးဖြတ် ထားပါတယ် လို့ ပြောဆိုကာ သတင်းတွေကို အဆုံးသတ် ပေးခဲ့ ပါတယ် ။
၉ ။ ဆာဒီယို မာနေး
ဆောက်သမ်တန် မှာ ခြေစွမ်းပြ နေတဲ့ မာနေး ကို လူးဝစ် ဗန်ဟား က စိတ်ဝင်စား ခဲ့ ပါတယ် ။ မာနေး ကိုယ်တိုင် က လူးဝစ် ဗန်ဟား နဲ့ ဆုံတွေ့ ခဲ့ပြီး ယူနိုက်တက် က ကမ်းလှမ်းခဲ့ ကြောင်း ကို ထုတ်ဖော် ပြောပြ ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဆီနီဂေါ တိုက်စစ်မှုး ဟာ ဗန်ဟား ရဲ့ ကစားပုံ ကြောင့် ယူနိုက်တက် ကို ငြင်းပယ် ခဲ့ပြီး နောက် တစ်နှစ် မှာတော့ လီဗာပူး ကို ပြောင်းရွှေ့ သွားခဲ့ ပါတယ် ။ မာနေး ရဲ့ အစွမ်းအစ ကတော့ အားလုံး သိကြပြီး ဖြစ် မှာပါ ။
၁၀ ။ ၀ီလ်ယံ
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် နွေရာသီ မှာ ချဲလ်ဆီး က တပည့်ဟောင်း ကို မော်ရင်ဟို ကြိုးစား ကြည့်ခဲ့ ဖူး ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ၀ီလ်ယံ ကတော့ အပြာရောင် ကို စွန့်ကာ အနီရောင် ကို ၀တ်ဆင် ဖို့ ဆန္ဒ မရှိခဲ့ ပါဘူး ။ အခု အချိန် မှာတော့ ၀ီလ်ယံ ဟာ ချဲလ်ဆီး အတွက် ပွဲပေါင်း ၃၀၀ ပြည့်မြောက် သွားခဲ့ပြီး အသံတိတ် ဂန္ထ၀င် တစ်ယောက် ဖြစ်လာ ခဲ့ ပါတယ် ။
၁၁ ။ အန်ဂိုလို ကန်တီ
လက်စတာ ရဲ့ ကွင်းလယ် မှာ မမောတမ်း မပန်းတမ်း ပြေးလွှား ဖျက်ထုတ် ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလားကြီးကို ရယူပေးခဲ့တဲ့ ကန်တီ ကို မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဖြစ်လာချိန် မှာ မော်ရင်ဟို က ခေါ်ယူ ဖို့ ကြိုးစား ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် မအောင်မြင် ခဲ့ ပါဘူး ။ ကန်တီ ဆီ ကိုယ်တိုင် ဆက်သွယ် ခဲ့ ပေမယ့် ကစား သမား က ချဲလ်ဆီး ကို ရွေးချယ် သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ကန်တီ လည်း ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား ကို ၂ နှစ်ဆက် တိုက် ရခဲ့ပါတယ် ။
၁၂ ။ အယ်ဗာရို မိုရာတာ
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို ငြင်းပယ်ပြီး ချဲလ်ဆီး ကို ပြောင်းရွှေ့ တဲ့ ကစား သမားတွေ ဟာ ဖာဂူဆန် နှောင်းပိုင်း ခေတ်တွေ မှာ ပိုမို များပြား လာခဲ့ ပါတယ် ။ ကန်တီ ၊ ပက်ဒရို တို့ ကိစ္စ တွေ မှာ ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ နှမြော တသ ဖြစ်ခဲ့ ပေမယ့် မိုရာတာ အပေါ် မှာ တော့ ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာ ဖြစ်ခဲ့ကြ မှာ သေချာ ပါတယ် ။ ယူနိုက်တက် ကို ရွေးချယ် ဖို့ ငြင်းဆန် ခဲ့တဲ့ စပိန်တိုက်စစ်မှုး ဟာ ချဲလ်ဆီး မှာ ပုံစံ ကောင်းမပြသ နိုင် ခဲ့ဘဲ မက်ဒရစ် ကို ပြန်ပြေး ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ယူနိုက်တက် ကတော့ အဆိုပါ နှစ် မှာ မိုရာတာ ကို မရလို့ ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ လူကာကူ ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေ ကြောင့် တစ်ရာသီစာ ပျော်ရွှင်မှု ကို ရရှိ ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီ ကစား သမားတွေ ဟာ ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန် အနားယူ သွားပြီး နောက်ပိုင်း မှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု ကို ငြင်းပယ် ခဲ့ပါတယ် လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို ခဲ့ကြသူတွေ ဖြစ် ပါတယ် ။ ဒီလို ထုတ်ဖော် မပြောပြ တဲ့ သူတွေ ရှိကြဦးမှာပါ ။ တကယ်လို့ သာ ဖာဂူဆန် ဆက်ပြီး ရှိနေခဲ့ဦးမယ် ဆိုရင် ဒီစာရင်း ထဲက တစ်ဝက် လောက်ဟာ ယူနိုက်တက် ကစား သမားတွေ ဖြစ်လာ နိုင် ပါတယ် ။
ဒါကြောင့် ကလပ် အသင်း တစ်သင်း ဆီကို ကစား သမား ကောင်းတွေ ရောက်လာဖို့ အတွက် နည်းပြ ကောင်း တစ်ယောက် ရှိနေဖို့ ကလည်း လိုအပ် တယ်ဆိုတာ ကို သိသာ မြင်သာ စေခဲ့ ပါတယ် ။ အခု အချိန် မှာ ဆိုရင် ကစား သမား ကောင်းတွေ ဟာ ဆိုးရှား ထက် ဂွာဒီယိုလာ နဲ့ ယာဂင် ကလော့ တုိ့ ကို ရွေးချယ် ချင်ကြမှာ အသေအချာ ပါပဲ . . .